70% ဘလက်ခ်ဘယ်ရီဘို့ကြီးတွေလျှော့စျေးပိတ်ထား 9630 မိုဘိုင်းဖုန်း | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
70% ဘလက်ခ်ဘယ်ရီဘို့ကြီးတွေလျှော့စျေးပိတ်ထား 9630 မိုဘိုင်းဖုန်း
ဇန္နဝါရီလ 20, 2015 မောင်းသူ OS ကို-STORE, ပရိုမိုးရှင်း 0
OS ကို-STORE big back end of the year, in order to thank our new and old customers, the company cut prices of BlackBerry 9630 မိုဘိုင်းဖုန်း（black ）. The event starting today, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနောက်ဆုံးအနေဖြင့်, ပထမဦးဆုံးအ-တာဝန်ထမ်းဆောင်အခြေခံ.
အဆိုပါ activities carried out only ထဲမှာ OS ကို-STORE.
ရမ် 256ကို MB
Rom 256ကို MB
OS ကို-STORE အားဖြင့်
70% ဘလက်ခ်ဘယ်ရီဘို့ကြီးတွေလျှော့စျေးပိတ်ထား 9780 မိုဘိုင်းဖုန်း
အမှား: ဤ ID အတွက်ပို့စ်များမရှိပါ
ဥပဒေရေးရာအနက် စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ပရိုဆက်ဆာ စီပီယူ Intel က Samsung က processor ​​ကို 64-နည်းနည်းက Windows device ကိုမော်ဒယ် နည်းပညာ OS ကို-STORE HTC က Technology_Internet ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Nokia က Software များ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု မိုဘိုင်းဖုန်း HD Graphics စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ
Samsung ရဲ့ Galaxy နည်းပညာ Sony Ericsson က processor ​​ကို HD Graphics Intel က Software များ ပရိုဆက်ဆာ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Technology_Internet ဥပဒေရေးရာအနက် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Samsung က Qualcomm မှ HTC က စမတ်ဖုန်းများ 64-နည်းနည်းက Windows စီပီယူ Intel က Server ကို OS ကို-STORE စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ device ကိုမော်ဒယ် မိုဘိုင်းဖုန်း Nokia က